Safal Khabar - विजुक्छेले अझै नेमकिपाको पार्टी नेतृत्व नछोड्ने
विजुक्छेले अझै नेमकिपाको पार्टी नेतृत्व नछोड्ने
बिहिबार, २६ भदौ २०७६, ०८ : ४७
काठमाडौं । राजनीति कति उमेरसम्म गर्ने ? कति वर्षसम्म पार्टी नेतृत्व सम्हाल्ने ? नेपालको राजनीतिको यक्ष प्रश्न हो यो । बाचुन्जेल नेतृत्वमा रहन रुचाउने नेतृत्वको नेपालमा की छैन ।